तिथि मेरो पत्रु » Angel बिल्ली
द्वारा लिन्डा एन्डरसन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 29 2020 |4मिनेट पढ्न
बिरालोहरु साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वा मात्र हामी आफ्नो भोजन आपूर्ति को स्रोत हो?
मानव Can उद्घाटक
ओपनर सक्नुहुन्छ प्रिय,
तपाईं हामी वरिपरि तपाईं पालन हामी बाटो देखि तपाईं प्रेम भन्न सक्दैन, कम से कम तपाईं आशा गर्दा आफ्नो छाती मा हाम फाल्ने, र ITIS dinnertime छैन म्याऊँ पनि जब? निस्सन्देह, youíve हामीलाई हाम्रो मनपर्ने बिरालो खाना दिइएको पछि हामी तपाईं झनै प्रेम!
Mommas सुन्दर बाघ striping संग एक खैरो बद गप्पी छ. हामी उनको भेट्टाएपछि, उनी गर्भवती भएको र हे दुरुपयोग आफु लागि रोकन र सडक मा उनको बिल्ली छ छोडिएको थियो. मेरो आमाबाबुले Mommas र Persephone मा कब्जा गर्दा म कलेज को मेरो पहिलो वर्ष थियो, यो आवारा catís एक बाँकी बच्चा. हामी आफ्नो उपस्थिति लागि कृतज्ञ थिए. Thorndike, पन्ध्र वर्ष हाम्रो बिल्ली, हाल मृत्यु भएको. उहाँलाई गुमाउनुपर्ने भन्दा हाम्रो शोक ठूलो थियो, र हामी एक catless घरमा बस्ने जारी गर्न चाहनुहुन्छ didnít. हामी म पोस्तीन प्रेम के भन्छन् आवश्यक,
म थियो विशेष गरी मेरो दुई दिदीहरूको पछि घरमा बस्ने मात्र सन्तान बाहिर उत्प्रेरित गरेको थियो. हाम्रो राम्रो भाग्य, Mommas र उनको छोरी बिल्ली मनोविज्ञान को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु साबित; तिनीहरूले peopleís भावनात्मक आवश्यकता हेरचाह गर्न कसरी थाह.
हामी उनको रोटी थिए भने Mommas मलाई मेरो आमाबाबुको अपनाएर उनको नाम कमाएका र. केही समयअघि हामीलाई घर आउँदै पछि, Mommas हामी माथि थिए के हेर्न वरिपरि हामीलाई पछि लागे. हामी कुनै पनि कराए जब, Mommas हाम्रो खुट्टा मा बसे र त्यो उनको प्रेम र सान्त्वना प्रशासन सम्म धैर्यतासाथ.
एउटै सहरमा रहन को वर्ष पछि, मेरो आमाबाबुले Mommas र Persephone संग पेंसिल्वेनिया गर्न उत्प्रेरित, मेरो दिदीबहिनी र म म्यासाचुट्स पछि बसे. मेरो बुबा मलाई सबै कुरा अर्थ, र म कहिल्यै चाहन्थे होला अन्तिम कुरा उहाँलाई एक्लै मर्नु थियो. यद्यपि एक रात, मेरो खराब डर साँचो आएको देखिन्छ. मेरी बहिनीहरु केही धेरै दुःखी समाचार संग मेरो दरवाजे मा आइपुगे: हाम्रो आमा मेरो बुबा जीवित कोठा मा झूट पाउन घर आउन sheíd भनी बताउन भनिन्छ थियो ?कान; टेलिभिजन हेरिरहेको बेला उहाँले बितिसकेका थिए. मेरो उद्धार गर्न, यद्यपि, मेरो दिदीबहिनी मेरो बुबा आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण मा मात्र भएको छैन भनेर भन्नुभयो. एक धेरै प्रिय मित्र उहाँसँग भएको थियो: Mommas.
मेरी आमाले काम लागि यात्रा गर्दा Mommas मेरो fatherís निरन्तर साथी भएको थियो. रात त्यो एक अनन्त निद्रामा भेट्टाए कि, त्यो पनि Mommas उहाँको छेउमा बसेर फेला. मेरो आमाले उहाँलाई रोया समेत, यस बिरालो मेरो बुबा छोड्न थिएन. एम्बुलेन्स आउँदा, Mommas उनको कदम बनाउन कुनै पनि प्रयास मा अगाडी र पुस्तक र गलैँचा मा उनको नंग्रा खने.
अन्तमा, सुसारेहरू मेरो fatherís शरीर दूर लिन सक्छ भनेर मेरो आमा बेडरूम मा उनको coaxed.
मेरो fatherís मृत्युपछि, Mommas मेरी आमा दिन र रात खोज्छन्, सबै कठिन समयमा. त्यो घर कम एक्लो लाग्न गरे. उनको फर्कनु संग, Mommas पीडादायी सम्झना कम मदत. मेरी आमा वा म रोएँ जब, Mommas धैर्यपूर्वक हामीलाई बसें, हाम्रो हात वा हात छुन एक पन्जा हटाएका, र हाम्रो अनुहार आँसु पाला हामीलाई त्यो नजिकै थियो थाह दिनु.
त्यो हामीलाई खलल छैन रूपमा त धेरै शान्त बसे; त्यो हामी शोकित गर्न आवश्यक थाहा देखिन्थ्यो. हामी रोइरहेको रोकेपछि, Mommas को साउंड सुरु हुने, सबै भन्दा वार्मिंग म्याऊँ. त्यसपछि हाम्रो गोद को एक मा चढाई sheíd. म मेरो आमा र म Mommas बिना ती पटक माध्यम मिल्यो होला कसरी थाहा गरदैन.
लगभग एक वर्ष मेरो fatherís मृत्यु पछि, Mommas hyperthyroidism संग बिरामी भए. महंगा क्यान्सर उपचार र औषधि बिना, उनको मृत्यु भयो हुन सक्छ. हामी हेरचाह गर्न हिचकिचाएनन् उनको. हामी अब उनको गुमाउन couldnít.
आखिर, त्यो हाम्रो परिवार को एक सदस्य थिए. त्यो पाउन्ड पछि पाउन्ड बगाउन थाले रूप, त्यो उनको वजन राखन अतिरिक्त भोजन खाए निश्चित हामी बनाउन Mommas संग सधैंभरि काम. अन्ततः, त्यो एक सानो सात पाउण्ड उनको सामान्य बाह्र किलो आंकडा देखि सिकुड. हामी विकिरण उपचार लागि एक पशु चिकित्सक उनको लिने निर्णय गर्दा, कर्मचारीहरु Mommas जस्तै एक बिल्ली कहिल्यै देखेका हामीलाई theyíd भन्नुभयो; त्यो यस वजन मा अन्य विरामीहरु भन्दा राम्रो स्वास्थ्य थियो. उनको उपचार को दिन मा, Mommas सबै पशु चिकित्सक प्राविधिकहरूलाई पछ्याइरहे, purring र तिनीहरूलाई आफ्नो cuddle दिँदै.
म Mommas राम्रो स्वास्थ्य फर्के भन्न आभारी छु. दुर्भाग्यवश, हामी यस वर्ष मधुमेह र उमेर Persephone गुमाए. यो यति धेरै उनको सामु बितेर रूपमा Mommas शान मा पकड हेर्न अनौठो छ. अहिले उनी हामी सडकमा देखि मा लिएर दुई ठूलो कुकुर पनि समावेश छ भनेर एक परिवारको शिर छ. हामी पनि अहिले DUTCHESS छ, थिचोमिचो र बेवास्ता गरियो गर्ने एक जवान नयाँ बिल्ली. DUTCHESS Mommasís हरेक कदम हेर्छ, कस्तो व्यवहार गर्न सिकिरहेका, कहाँ जाने, र के खाने.
Mommas धेरै उमेरको छ. अहिले उनी धेरै पतली छ, र उनको कपाल यसको आभा सबै भन्दा गुमाइसकेको छ. त्यो उनको फर कोरीबाटी गर्दा घाम मा बस्न शान्त र सामग्री छ. उनको सीमित छ संग म मेरो समय थाह तापनि, म यो सोच्न प्रयास. बरु, म Mommas मलाई सिकाएको ध्यान केन्द्रित. म शर्त प्रेम बारेमा यो बिरालो बढी सिकेका, आदर, अरू कसैको भन्दा र परिवार जिम्मेवारी. उनको कुनै शब्द पर्याप्त वर्णन गर्न सक्छन् कि प्रेम छ.
सबै अरू माथि, Mommas कारण म एक पशु प्रौद्योगिकीविद् भएका छन् छ. त्यो म गम्भीरतासाथ र प्रिय पकड एक कामवासनाले मलाई प्रेरित. म आफ्नो दुःखकष्ट कुरा छैन गर्नेहरूलाई हेरचाह गर्न सिक्दैछु, चुपचाप हामीलाई गर्छन र बदलामा हाम्रो प्रेम लागि मात्र माग्ने.
साँचो मित्र को वफादारी जीवनमा सबैभन्दा ठूलो आराम को एक हुन सक्छ.
अरूको हुनुहुन्छ, पशु वा मानव, चोट र आफ्नो छेउमा तपाईं आवश्यकता हो जो?
किन तपाईं अझै पनि एक छौं – यो भन्दा प्राप्त